Caawiyaasha Laanta Shaqaalaynta oo la dhaliilay | Somaliska
Shirkadaha iyo shaqsiyaadka ay shaqaalaysiiso Laanta Shaqaalaynta (Arbetsförmedlingen) si ay u caawiyaan dadka shaqo la'aanta ah ayaa dhaliil loo jeediyay. Qarashka ku baxa barnaamijka an ayaa mardhow ku dhufanaya 1 bilyan oo karoon ayadoo la sheegay in aan la garanayn faaidada ay leeyihiin shirkadaas. Laanta Shaqaalaynta ayaa howl galisa 820 shirkadood oo madax banaan oo dadka shaqo la'aanta ka caawiya siday shaqo u helilahaayeen balse wax qiimeyn ah laguma sameyn hufnaanta hawsha ay shirkadahaan qabtaan. Laanta Shaqaalaynta ayaa u jeedada ay u shaqaalaysiisay shirkadaan ku sheegtay in ay ka caawinayaan dadka shaqo la'aanta ah in ay talo siiyaan, CVga in ay u qoraan oo ay fududeeyaan siday shaqo ku heli lahaayeen. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in Laanta Shaqaalayntu ay wax ka badasho nidaamka ayadoo yarayn doonta dadka ka shaqeeya caawinta shaqo la'aanta.
Shirkadaha iyo shaqsiyaadka ay shaqaalaysiiso Laanta Shaqaalaynta (Arbetsförmedlingen) si ay u caawiyaan dadka shaqo la’aanta ah ayaa dhaliil loo jeediyay. Qarashka ku baxa barnaamijka an ayaa mardhow ku dhufanaya 1 bilyan oo karoon ayadoo la sheegay in aan la garanayn faaidada ay leeyihiin shirkadaas.
Laanta Shaqaalaynta ayaa howl galisa 820 shirkadood oo madax banaan oo dadka shaqo la’aanta ka caawiya siday shaqo u helilahaayeen balse wax qiimeyn ah laguma sameyn hufnaanta hawsha ay shirkadahaan qabtaan.
Laanta Shaqaalaynta ayaa u jeedada ay u shaqaalaysiisay shirkadaan ku sheegtay in ay ka caawinayaan dadka shaqo la’aanta ah in ay talo siiyaan, CVga in ay u qoraan oo ay fududeeyaan siday shaqo ku heli lahaayeen.
Sanadka soo socda ayaa la filayaa in Laanta Shaqaalayntu ay wax ka badasho nidaamka ayadoo yarayn doonta dadka ka shaqeeya caawinta shaqo la’aanta.
Wiil u istaagay difaaca Soomaalida Sweden